​सरकार र चिकित्सक संघबिच आज सहमती होला ?
काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघबिच शनिबार भएको वार्ता सहमतिको नजिकै पुगेपछि आज सहमति हुने संभावना बढेको छ । सरकारले चाहे आइतबार सहमति हुने चिकित्सक संघले जनाएको छ ।
शनिबार भएको वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मौखिक सहमति भएपनि लिखित सहमति हुन....
​कस्तो खसीको मासु खाने ?
दसैँमा खसी–बोका तथा च्यांग्रा खरिद गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने एक पटक विचार गर्नुहोस् । ग्रामीण भेगमा त दसैँलाई भनेर केही समयपहिलेदेखि नै बोका पालेर राखिएको हुन्छ । तर, सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले खसी–बोका किन्दा विशेष सजग हुनुपर्छ । कस्तो खसी बोका किन्ने त ?
​१९ दिनको छोरो गुमाएकी सञ्जु डेढ महिनादेखि मृत्युसँग लड्दै
विराटनगर । उपचारमा लापरबाही हुँदा छोरो गुमाएका विराटनगर ४ का पवन साहले मृत्युको छटपट्टिीमा रहेकी आफ्नी श्रीमतीलाई डेढ महिनादेखि अस्पतालको बेडमा उपचार गरिरहेका छन् । सामान्य लेवर पेन बाहेक खासै केही नभएको बताउने साहले आफ्नी श्रीमति सञ्जु साहलाई सुरुमा रुटिन चेकअप गर्ने चिकित्सककोमा पुर्याए ।
​अन्ततः चिकित्सकको दबाबमा पछि हट्यो सरकार
काठमाडौं । चिकित्सकहरुको दबाबका कारण अन्ततः सरकार लचिलो बन्दै पछि हटेको छ । चिकित्सकको चरम लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भए सम्बन्धित चिकित्सकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने गरी कानुन बनाउने तयारीमा जुटेको सरकार चिकित्सकहरुकै दबाबमा पछि हटेको हो ।
सरकारको निर्णयप्रति आक्राशित बनेका चिकित्सकहरुले अस्पतालको सेवा....
किन हुँदैछन् शुक्रबारदेखि देशभरका स्वास्थ्य संस्था बन्द ?
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द हुने भएको छ । उपचारका क्रममा लापरबाही भएर बिरामीको मृत्यु भए चिकित्सकले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने नियम सरकारले खारेज नगरे यी सेवा बन्द गर्ने चिकित्सक संघले घोषणा गरेको छ ।
​कसरी गर्ने डाइविटिज नियन्त्रण ?
न्यूजलय बुधबार ०४, असोज २०७४
अस्वस्थ्य खानपान, शारीरिक व्यायामको कमी लगायतका कारणले गर्दा पछिल्लो समयमा डाइभेटिज (मधुमेह)का रोगीहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । डाइभिटिज भइसकेपछि त्यसलाई निदान गर्नु भन्दा खानपानमा ख्याल गरेर त्यसलाई लाग्न नदिने वा प्रारम्भिक चरणमै नियन्त्रणको प्रयाश जरुरी छ । त्यसका लागि तल उल्लेखित काम गर्न सकिन्छ....
सामान्यतया जाडो महिनामा घाममा बसेर बदम खाने प्रचलन बढी भएपनि बदम सधै खाँदा फाइदा पुग्छ । बदामको नियमित प्रयोगले क्यान्सरबाट बचाउँन देखि तौल नियन्त्रण गर्नुका साथै डायबिटिजबाट पनि जोगाउँछ ।
क्यान्सरबाट जोगाउँछः बदामको नियमित प्रयोगले क्यान्सरबाट बचाउँछ । बदाममा पाइने फाइटोस्टेरोल नामक तत्वले ट्युमरलाई....
​पुरुषले नखानुहोस् यस्ता खानेकुरा
न्यूजलय मङ्गलबार ०३, असोज २०७४
केही यस्ता खाने कुराहरु छन् जसले महिलाभन्दा पुरुषहरुलाई धेरै नोक्सान गर्ने गर्छन् । यस्ता भोजनका कारण धेरै हर्मोनल समस्या, कमजोरी लगायत अन्य बिरामीको कारण समेत बन्न सक्छन् । केही यस्ता खाने कुराहरुबाट पुरुषहरु सजग रहनुपर्छ ।
१. कफी र कोल्ड ड्रिकः एक रिसर्चका अनुसार....
​यस्ता छन् रुनुका फाइदा
रुनु कमजोरीको प्रतिक मानिन्छ । तर, अनुसन्धानकर्ता भन्छन् रुनु स्वास्थको लागि राम्रो हो । कहिले कामदेखि वाक्क लागेर, सुमुधुर सम्बन्ध टुट्दा तथा फिल्म हेरेर हामी रुने गर्छौ । एक वर्षमा एक व्यक्तिले ३० ग्यालोनसम्म आँशु उत्पादन गर्न सक्छ । चाँहे खुसीको क्षणमा होस् या दुखको....
काँक्रो खाँनुका फाइदै–फाइदा
विशेष गरि काँक्रो सलादको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । तर, यसलाई अचारको बनाएर पनि खान सकिन्छ । काँक्रोमा ९६ प्रतिशत पानीको मात्रा हुन्छ । मानिसको शरीरमा पानी आपूर्ति गर्न काँक्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । साथै काँक्रोका अन्य फाइदाहरु पनि छन् ।
– काँक्रोको बोक्रामा नै....